IBC2110 အတွက် Interoperable SMPTE ST 2019 Solutions ၏ Macnica သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC2110 များအတွက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ SMPTE ST 2019 Solutions ၏ Macnica Accelerator ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
IBC2110 များအတွက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ SMPTE ST 2019 Solutions ၏ Macnica Accelerator ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
IP ကိုကျော်ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထူးကုကွန်ယက်ကိုမီဒီယာ switching ကဒ်များ VIPA မိသားစုဖြစ်ပေါ်နေသောအတူထုတ်လွှင့်မှုအတွက် Module (Som) ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသစ် System ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်
SOLANO သောင်ပြင်, California, စက်တင်ဘာလ 6, 2019 - Macnica, IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများကျော်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, IBC2019 နောက်လ (စက်တင်ဘာလ 13-17, RAI အမ်စတာဒမ်) မှထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး AV စနစ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ Macnica က၎င်း၏ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက် SMPTE application များထုတ်လွှင့်ဖို့တိကျတဲ့ Module (Som) ဖြေရှင်းချက်အပေါ်၎င်း၏ပထမဆုံးစနစ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ပါဝင်သော ST 2110 နှင့် NMOS OEM developer ထုတ်ကုန်။
Macnica ကိုလည်း 25 မှာမိတ်ဆက်၎င်း၏ Ultra-wideband 25Gb / s ကို VIPA2019 module တစ်ခုအပါအဝင်အရှိန်မြှ network interface ကိုကတ်များ၎င်း၏လက်ရှိ VIPA အကွာအဝေး, တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန် ဧပရယ်လမှာ။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲများတွင် IP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး applications များကျော် 1000Gb / s ကို AV စနစ်အဘို့အ Macnica ရဲ့ MPA1 module တစ်ခုတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
"Macnica မှထုတ်ပြန်သော OEM ၎င်း၏အစုစုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုး, နှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်စျေးကွက်များတွင်အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျော် AV စနစ်အတွက်ဖွင့်စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရပ်ရွာအားထုတ်မှုအတွက်တက်ကြွ," အင်ဒရူး Stark, Macnica မှာကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် 1Gb / s နဲ့, 10 Gb / S နှင့်လုံးဝနီးပါးမဆိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျှောက်လွှာများနှင့်ဘစ်နှုန်းကိုဖုံးလွှမ်းရန် 25 Gb / s နဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များကိုနောက်မျိုးဆက်ကို၎င်း, အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရေရှည်တန်ဖိုးကိုအဆိုပြုဖြတ်ပြီးအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာစေရန်, ထိုကဲ့သို့သော ST 2110 အဖြစ်ဖွင့်လှစ်စံချိန်စံညွှန်းများ, အသုံးပြု. သည်ဤဖြေရှင်းချက်ကိုတည်ဆောက်နေကြတယ်။ "
IBC2019 Module အပေါ် SDI တံခါးပေါက် System ကိုမှ EASYSS10 ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဆက်တစ် 10GbE ST 2110 ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ ဟိုက်ဘရစ် router များ, signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များနှင့်တံခါးပေါက် device များအတွက်ဒီဇိုင်း, အ EASYSS10 နှင့်ရရှိနိုင်ပါရည်ညွှန်းဘုတ်အဖွဲ့ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်စံချိန်စံညွှန်းများ-based အသံလွှင့်အိုင်ပီထုတ်ကုန်ဖို့အကူးအပြောင်းစေ။
အဆိုပါ EASYSS10 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းခြောက်လ SDI သွင်းအားစုများနှင့်ခြောက်လ SDI လက်ငင်းပါဝင်သည် HD-SDI နှင့် 3G-SDI ။ အဆိုပါကွန်ရက်အခြမ်းတွင်, dual-SFP + ဆိပ်ကမ်းများမလိုအပ်တဲ့မီဒီယာကွန်ရက်များကိုထောက်ပံ့။
ယင်း၏ IBC2019 မှာ (2.A18) ရပ်, Macnica မလိုအပ်တဲ့ကွန်ရက်များကျော်က၎င်း၏ချောမွေ့စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး switching ပြတစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသရုပ်ပြအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဒီဇိုင်းများနှင့် EASYSS10 ၏ခံနိုင်ရည်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကနှင့်အတူလိုက်နာမှုသေချာ SMPTE နှစ်ခုအပြိုင်ကွန်ရက်များကျော်အချက်ပြမှုများကိုပြောင်းရွှေ့သဖြင့်ကျဆင်းသွား packets တွေကိုဆန့်ကျင်ထုတ်လွှင့်ကာကွယ်ပေးသည်ရာ 2022-7 စံ။
Macnica လည်း MPA1000 low-အောင်းနေချိန် IP ကိုဗီဒီယိုက OEM ထုတ်လုပ်သူမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခင်းကျင်းဖြစ်စေသော IP ကို ​​module တစ်ခုကျော် full-stack AV စနစ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ 1000: 60 ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်တစ်ဦးစံ 4GbE connection ကိုထိန်းချုပ် Macnica ရဲ့ MPA4 ချုံ့ UHD 4P 1 သယ်ပို့ပါသည်။
အဆိုပါ module တစ်ခုအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိရန်လယ်ကွင်း-Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်၏ အကြောင်းအရာစီး၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဘို့အပွင့်လင်းစံ - တစ်ချိန်ကကွန်ယက်ချိတ်ဆက်, မီဒီယာအသွားအလာအဆိုပါပါဝင်သည် NMOS မှတဆင့်ရှာဖွေဖြစ်ပါသည် / 04 န်ဆောင်မှု-05 IS ။
အဆိုပါ module တစ်ခု core ကိုဒီဇိုင်းနိယာမ - အ MPA1000 ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အဆိုပါ module တစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုသူများအတွက်အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်သော web application ကိုနှင့်အတူအနားယူ API ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကို web server ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ Macnica ဒါ့အပြင်တောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိနိုင်ဒီဇိုင်းဖိုင်တွေနဲ့အတူစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု MPA1000 Development Kit ပေးထားပါတယ်။
Network မှ Interface Card များကို
IBC Macnica ရဲ့ VIPA 25 PCI Express (PCIe) ကဒ် compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက်ကျယ်ပြန့်-bandwidth ကိုဖွရှေငျးခ၏နိဒါန်းခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ အဆိုပါ VIPA 25 အဆိုပါ CPU ကိုထံမှ ST 2110 မီဒီယာစီးဆင်းမှုကွန်ယက်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အချိန်ကိုက်ပမာဏ accelerates တဲ့ Full-stack ST 2110 / NMOS ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအဆင်သင့် developer များပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်နောက်မျိုးဆက်, IP ကို-Network ထုတ်လွှင့် application များဖန်တီးစတင်ရန်အဘို့အ -making NMOS IS-04 / 05 နှင့် GStreamer filter များ (အရင်းအမြစ်နှင့်ထပ်တူပြုခြင်း) တို့ပါဝင်သည်တစ်ရိုး, ရိုးရှင်း API ကိုပေးပါသည်။ တစ်ခုက optional ကို 12G-SDI daughtercard ST 2110 အတူချောမွေ့စွာ API ကို access ကိုအတူ SDI ထောက်ခံမှုကထပ်ပြောသည်။
Macnica လည်းအပါအဝင် IBC မှာ၎င်း၏မကြာသေးမီကမိတ်ဆက် 10GbE ကဒ်, ထို VIPA 10 ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ယင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကို Development Kit (SDK ကို) ၏အသစ်ကစွမ်းရည်အချို့ကို။ နှစ်ဦးစလုံး VIPA ဖြေရှင်းချက် developer များအဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုကောင်းအောင်အားလုံးအတည်ပြုစံ Subtype ထောက်ခံပါတယ်။
Macnica နည်းပညာ, IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများနှင့် ST 2110 အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြောင်းဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ APIs အား၏ဖန်ဆင်းရှင်ကျော်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, Solana သဲသောင်ပြင်, ကာလီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်သည်။ Macnica ပိုကောင်းထောက်ခံမှုဗီဒီယို / ပုံရိပ်နဲ့ Networking / သိုလှောင်မှု၏အထူးပြုနည်းပညာနယ်ပယ်များတွင်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်မည် ဤအနည်းပညာများကို အသုံးပြု. ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြိုးစားနေဖောက်သည်။ ကျနော်တို့ပေါင်းစည်းမှု၏အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်မှာထုတ်ကုန်ကိုပူဇော်: component တစ်ခု-Level့semiconductor devices, FPGA သည် IP, ပျဉ်ပြားနှင့်အ module တွေ, software နှင့်စုစုပေါင်းဖြေရှင်းနည်းများ။ ဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် Macnica နည်းပညာ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.macnicatech.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-09-06
နောက်တစ်ခု: SRT နှင့်အတူပြည်သူ့အင်တာနက်ကိုကျော် Encrypted ဗီဒီယိုပေးပို့ခြင်းတစ်ခုNDI® Delivery ပလက်ဖောင်း - BirdDog BirdDog တိမ်တိုက်ဦးလွတ်မြောက်